Shiinaha 1390 CO2 Laser xardha ee loo yaqaan 'Acrylics', 'Fabric', Jiinis, Soo saaraha maqaarka iyo alaab-qeybiye | Baaq
1390 CO2 Laser xardha loogu talagalay acrylics, Fabric, Jeans, Leather
#Qeexitaanka qaybta iskutallaabta, saxsanaanta sare, xasilloonida wanaagsan, qancinta dalabaadka geeddi-socodka ee qaybaha saxda ah. Waxqabadka firfircoon ayaa xasilloon, awood u leh inuu shaqeeyo waqti dheer.
# Awood u leh jarista biraha iyo biraha labadaba, awood u leh in la jaro birta birta ah, birta kaarboonka, acrylic iyo alwaax, iwm.
# Madaxa goos gooska leh nidaamka diirada tooska ah. Madaxa goynta laser-ku wuxuu si otomaatig ah u hagaajiyaa dhererkiisa oo uu weheliyaa dusha sare ee xaashida birta ah, isagoo hubinaya in dhererka focalku isku mid yahay mar walba. Jarista siman, uma baahna qiraan ama maarayn kale oo dheeraad ah. Xaashiyaha birta ah ee fidsan iyo kuwa ruxruxa ayaa lagu jari karaa mashiinkan.
Laser xardha la awoodi karo waxaa loo isticmaali karaa goynta, xoqidda iyo xardho maqaar, dhar, dhar, warqad, jiinis, fiilooyin iyo qalab kale oo dabacsan. Hadda xardha laser ah iibka ah qiimo jaban.
Noocyada xardhashada leysarka ee Leather, Fabric, Jeans, Paper
1. Degganaansho sare iyo qaab-dhismeed farsamo xoog sare leh oo lagu tuuray nooca saxda ah ee saxda ah kaas oo hubin kara dhaqdhaqaaqa xogta deggan, xawaaraha sare, saxsanaanta sare, hawlgalka muddada-dheer iyada oo aan la hagaajin iyo isla qaabaynta saxda ah. Fikradda naqshadeynta ee ku wareegsan jirka iyada oo loo marayo ku dari kartaa qalab ka hor iyo gadaal taas oo loogu talagalay workpiece aan dhamaadka lahayn.
2. Labada madax ee leysarka xardha wuxuu qaataa nidaamka xakamaynta dhijitaalka ah ee DSP ee horumarsan, korantada heerka caadiga ah ee laydarka, qaabka isku dhafan ee isku dhafan, xasilloonida sare, soosaarka xawaaraha sare ee USB 2.0 wuxuu taageeri karaa ka-shaqaynta khadka-tooska ah.
3. Faylasha si toos ah uga sii gudbi Coredraw, AutoCAD.
4. Ku habboonaanta naqshadaha makaanikada iyo korantada, buuq hooseeya.
5. Awooda weyn iyo tuubada leysarka ee xasiloonida sare, muraayadaha la keeno iyo muraayada, cimriga dheer.
6. Tareenka toosan ee la soo dhoofiyay iyo cajalado tayo sare leh oo la isugu gudbiyo, qalabaynta qaab-dhismeedka xawaaraha-hoos-u-dhaca, hubinta goynta tayo sare leh iyo xasilloonida sare.
7. Miis kor-u-toos ah oo kor u kaca ah, qalab Rotary ah, booska dhibic cas, Z dhidibka ikhtiyaar ahaan.
Codsiyada Laser xardha Jeans, Hargaha, Dharka, Waraaqda
Qalabka la adeegsan karo: Maqaarka, dharka, dharka, dharka, muraayadda, muraayadda dabiiciga ah, akril, alwaax, MDF, PVC, plywood, caleen khariidad ah, loox laba-midab leh, bamboo, plexiglass, warqad, marmar, dhoobada, iwm.
Warshadaha Khuseeya: Taallo / Xabaal-dhagax / Warshadeynta dhagxaanta, warshadaha dharka, warshadaha moodeelka, moodooyinka dhismaha, moodooyinka duulista iyo hagidda iyo alaabada carruurtu ku ciyaarto, xayeysiinta, qurxinta, farshaxanka, farsamada gacanta, elektaroniga iyo qalabka korontada, iwm.
Halbeegyada Farsamada ee Laser xardha ee Leather, Paper, Fabric, Jeans
Aagga Shaqeynta 1300mm * 900mm
Awood Laser 60W (80W, 100W, 130W, 150W xulasho ahaan)
Nooca Laser Tuulada laysarka CO2
Software la jaan qaadi kara LaserWorks V8
Nidaamka Jagada Dhibic cas
Taageer Qaabka Sawirka AI, PLT, BMP, DXF, iwm
Habka Wadista Mootada Stepper
Habka qaboojinta Wareejinta biyaha qaboojinta
Lifaaqyada Venting Hawo fiiqista hawada leh tuubada hawo bixinta
Danab shaqeeya AC 110 - 220V
1390 mashiinka laser
mashiinka leysarka cnc
Shiinaha New 300mm Rotary 4 dhidibka ATc Wooden Carvin ...
2 × 3 CNC Router 6090 ee Iibinta Qiimaha Qiimaha
3 Mashiinka Laashka dhidibka ee Loogu Talo Galay Qoryaha Qaaska ah